आत्मा, मानिस र आध्यात्मवाद - मूल्याङ्कन अनलाइन
आत्मा, मानिस र आध्यात्मवाद
तुल्सीदास महर्जन | October 18, 2016
मानव आत्माको सांकेतिक चित्र । चित्र : Google Image
आध्यात्मवादका कुराहरु हामी धर्म, धर्मशास्त्र र दर्शनशास्त्रहरुमा पाउने गर्छौं । तर, यो विज्ञानसँग पनि जोडिएको छ । विज्ञानले आत्मालाई मानवमा भएको चेतनाको उच्चतम अवस्थाको रुपमा लिन्छ । पुरातत्वमानवशास्त्र तथा मानवशास्त्रले आधुनिक मानवमा जस्तो उच्च चेतना वा आत्मा नभएका लाखौ वर्ष पुराना मानवपुर्खा प्रजातिहरुको जीवावशेष पत्ता लगाएका छन् । करोड वर्ष अगाडिको कुरा गर्ने हो भने त्यतिखेर पृथ्वीमा मानवको उद्विकास नै भएको थिएन । आत्मा त आधुनिक मानवसँग मात्र भएको कुरो हो । मानव नै नभएको अवस्थाको त्यतिखेरको पृथ्वीमा आत्माको अस्तित्व हुने त कुरै भएन । अर्थात् करोड वा करोडौं वर्ष पहिले यो पृथ्वीको अस्तित्व थियो र यसमा अन्य वनस्पति तथा प्राणीहरु पनि थिए, तर आत्माको अस्तित्व चाहिँ थिएन ।
वर्तमान समयमा जान्नेसुन्ने मार्क्सवादीहरु आध्यात्मवादी भन्दा बढी भौतिकवादी भनेर आफूलाई चिनाउन चाहन्छन् । तर, तिनीहरुमध्ये धेरैलाई के लाग्न सक्छ भने आत्माको अस्तित्वको कुरा गर्नासाथ आध्यात्मवादी होइन्छ । त्यसैले आत्माको कुरै नगरौं, सबै कुरा भौतिक पदार्थसँग गाँसिएका हुन्छन्, त्यसैको मात्र कुरा गरौं भन्ने उनीहरुको आग्रह हुन्छ । तर, नगरौं भन्दाभन्दै पनि हरेक क्षणमा आत्माको कुरा अगाडि आइहाल्छ । म, तिमी, तपाईं, उनी, तिनी सबैको पहिचान आत्माले नै गरेको हुन्छ । त्यस्तै मेरो, तिम्रो, तपाईंको, उनको, तिनको आदि सबैमा आत्माले नै काम गरेको हुन्छ । रुचि, अरुचि, माया, ममता, पे्रम, घृणा, रीस, राग, इष्र्या सबैमा पनि आत्माले नै काम गरेको हुन्छ । त्यसैले भौतिकवादीले जति नै पन्छाउन खोजे पनि उसलाई आत्माको कुरोले कहिल्यै छोड्दैन । मान्छे जहाँ गए पनि आत्माको कुरो ऊसँगै टाँसिएर आएको हुन्छ ।
त्यसो भए आत्माको अस्तित्वको वास्तविकता के हो त ? जहाँ गए पनि आत्माको कुरोले मान्छेलाई नछोड्नुको अर्थ आत्माको अस्तित्व बकाइदाका साथ छ । कसैले नमान्दैमा त्यसको अस्तित्व नहुने हो र ? अनि वास्तवमा आत्मा नै मान्छेको अलगअलग पहिचानको आधार हो । अलगअलग आत्माको कारणले नै म, तिमी, तपाईं र हजुर, उनी र तिनी भन्ने भावना मान्छेमा हुने हो । त्यसैले आत्माको अस्तित्व बिना मान्छेको पनि अस्तित्व हुँदैन । तर, आत्माको अस्तित्वको कुरो गर्दैमा आध्यात्मवादी होईंदैन ।
अपवादमा बाहेक सबै मान्छे मृत्युसँग डराउँछन् । सबैलाई थाहा छ, जति नै डराए पनि र जति नै नचाहे पनि एक दिन जो कोहीको पनि मृत्यु त हुन्छ नै । मृत्यु हुँदा मान्छेको शरीर ज्युँकात्युँ रहिरहन्छ । खालि त्यो शरीर चलायमान नभई ढुङ्गाझैं स्थिर हुन पुग्छ । त्यस्तो स्थिति त मुर्छामा पनि हुन्छ नि । तर, मुर्छित मान्छे पछि त्यस अवस्थाबाट पार गरी पुनः चलायमान हुन सक्छ । मृत्यु भइसकेपछि भने मान्छे पुनः ब्युँझिएर आउने सम्भावना शतप्रतिशत रहँदैन । किन ? किनकि, त्यो शरीरमा सम्पूर्ण जीवकोषभित्रको जैविक प्रक्रिया बन्द भइसकेको हुन्छ । त्यस अवस्थामा पुगिसकेपछि शरीरभित्रको कुनै पनि जीवकोषमा पुनः जैविक प्रक्रिया सुरु हुन सक्दैन । वास्तवमा मृत्यु त्यही नै हो । त्यसैले मृत्यु भइसकेपछिको शरीरलाई शरीर नभनी शव भनिन्छ । मृत्यु भएपछि शरीर त मर्यो, आत्मा कहाँ गयो नि ?
हो, यही प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा आध्यात्मवाद र भौतिकवादमा भेद छुट्टिन्छ । यही प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा आदर्शवाद र विज्ञानमा फरक हुन्छ ।
मान्छेको मृत्यु भएपछि आत्मा कहाँ गयो ? भन्ने प्रश्नमै आध्यात्मवाद लुकेको छ । आत्मा कहिँबाट आएकै होइन । त्यसैले त्यो कहिँ जाने कुरै भएन । त्यो कहिँबाट आउँदैन पनि, कहिँ जाँदैन पनि । त्यो जिउँदो शरीरमा विकसित हुन्छ र मृत्यु हुँदा शरीरसँगै त्यसको पनि समाप्त हुन्छ । यानी कि त्यसको छुट्टै स्वतन्त्र अस्तित्व हुँदैन । आत्माको अस्तित्व हुन्छ, तर अलग अस्तित्व हुँदैन । हाम्रो शरीरले आत्मा विकासको क्षमता बोकेको हुन्छ । यहाँ शरीर भन्नाले शरीरका अरु अङ्ग नभई मस्तिष्क भन्ने बुझ्नुपर्दछ । चेतना, बुद्धि, मन, भावना आदि सबै आत्मासँग जोडिएका कुराहरु हुन् । आत्मा मस्तिष्कसँग जोडिएको कुरो हो ।
मस्तिष्क जनावरमा पनि हुन्छ । तर, उनीहरुको मस्तिष्कको विकास मानव जातिको स्तरमा भएको हुँदैन । जनावर र मानवको मस्तिष्क क्षमतामा मुख्य फरक भनेको नै अघिल्लोले सिर्जना र तर्क गर्न सक्दैन तर पछिल्लोले सक्छ । जनावरमा भावना हुँदैन, मानवमा हुन्छ । यो भनेको जनावर र मानवको मस्तिष्क क्षमतामा भएको फरकपना हो ।
भावनाले आफू र अरुमा भिन्न देखाउँछ । र, यसबाट नै ‘म’ को अनुभूति हुन्छ । ‘म’ को अनुभूति नै आत्मा हो । त्यसैले आत्मा भनेको मानवमा मस्तिष्क विकासको क्रममा सिर्जित संवेग र चेतनाकै विकसित रुप हो । अर्थात्, यो मानवमा भौतिक शरीरको विकासको क्रममा सिर्जित र विकसित विशिष्ट गुण हो । आत्मा मानवको भौतिक शरीरको विकासको उपज भए पनि यो यति विकसित छ कि यसले आफूलाई भौतिक शरीरभन्दा स्वतन्त्र देख्दछ । तर, यथार्थमा आत्मा कहिल्यै भौतिक शरीरबाट अलग र स्वतन्त्र हुन सक्दैन । आधुनिक प्रविधिको उदाहरण दिने हो भने मानवको भौतिक शरीर भनेको कम्प्युटरको हार्डवेयर हो र आत्मा चाहिँ सफ्टवेयर । सफ्टवेयर जति नै क्षमताको भए पनि हार्डवेयर बिना त्यसको कुनै अस्तित्व हुन्न । त्यस्तै जिउँदो मानव शरीर बिना आत्माको अस्तित्व हुँदैन ।
दर्शन/संस्कृति No Comments » Print this News
« सी र मोदीसँगको भेट नेपालको हितमा थियो (Previous News)
(Next News) नयाँ प्राचीन मानव प्रजातिः ईडा »
अभय श्रेष्ठ (साहित्य तत्कालीन समय र स्थानको ऐना हुन्छ । साहित्यमा समाजको संरचना, राजनीति, अर्थव्यवस्था,पूरा पढ्नुहोस्
राजतन्त्रको अवसानबाट संस्कृतिको क्षेत्रमा पर्ने प्रभावहरु
(समालोचक निनु चापागाईं संस्कृतिका शास्त्रीयदेखि आधुनिक अवधारणासम्मका ब्याख्याता हुन् । नेपालमा शाहवंशीय राजतन्त्र पृथ्वीनारायण शाहलेपूरा पढ्नुहोस्
कृष्णमन्दिरको पुनःनिर्माण ६ महिनाभित्र
‘कात्तिक नाच’ विश्वकै सबैभन्दा लामो नाट्य महोत्सव
प्यूठानमा परम्परागत सराँय नाच प्रतियोगिता सम्पन्न
फोक्सिङकोटको रानीवासमा मारुनी नाच
लोप हुँदै पिङ संस्कृति
थारु गाउँमा दशैँको रमझम, सखिया नाचले गाउँघर गुञ्जयमान
लोपोन्मुख अवस्थामा गुल्मीको खन्जना
मगर बस्तीमा सय वर्षपछि गाउँ फर्कियो सोरठी नाच